स्त्री होस् या पुरुष, यी ४ कामलाई धेरै दिनसम्म लुकाउन सक्दैनन् - IAUA
ramkrishna September 18, 2017	यी ४ कामलाई धेरै दिनसम्म लुकाउन सक्दैनन्स्त्री होस् या पुरुष
१. झूट महाभारतमा कर्णले परशुरामसँग आफू ब्राह्मण हुँ भनेर झूट बोलेका थिए। परशुरामले पनि कर्णलाई ब्राह्मण नै सोँचेर सबैप्रकारका शस्त्र-अस्त्रका ज्ञान दिए। तर एकदिन कर्ण ब्राह्मण होइनन् भन्ने थाहा पाएपछि ‘सबैभन्दा बढि आवश्यक परेको बेला सबै शस्त्र-अस्त्रको ज्ञान भुल्न परोस्’ भनेर परशुरामले कर्णलाई श्राप दिए।
समाचारमा पनि सुन्नुभएकै होला- ‘बलात्कार गरी हत्या गर्ने पक्राउ’, ‘आफ्नै बुवाको हत्या गरी फरार हुने पक्राउ’, आदि-इत्यादि।कसैले जतिसुकै योजना बनाऊन् हत्या गरेर लुकाउनको लागि! समय आएपछि एकदिन हत्यारालाई सजाय अवश्य मिल्छ।जसरी तपाईँको जीवन अमूल्य छ, त्यसरी नै सबै प्राणीको जीवन अमूल्य हुन्छ। कसैको हत्या गर्नुलाई शास्त्रमा ‘अक्षम्य पाप’ भनिन्छ। ‘अक्षम्य’- क्षमा गर्नै नसकिने।
उदाहरणको लागि रावणलाई लिन सकिन्छ, दुर्योधनलाई हेर्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नो शक्तिको घमण्ड गरेकै कारण अन्त्यमा नष्ट भएर जानुपरेको थियो।एकदिन पाण्डव भिमलाई आफ्नो शक्तिप्रति घमण्ड जागेको थियो। तर हनुमानको शुद्ध वाणीको कारण उनले आफ्नो घमण्ड त्यागेका थिए।nepaliheadlines
Previous Previous post: पूजा कोठामा कहिल्यै नराख्नुहोस् पितृको तस्बिर, यस्तो संकट निम्तिन्छ
Next Next post: महिलाले मोबाइलमा सवैभन्दा बढी हेर्छन् यी सामाग्री